Imveliso-iBaron (China) Co., Ltd.
Ezinye iidrafti ziyamangalisa, kodwa ngekhe ukwazi ukwakha yonke i-stash yakho kunye nelo diaper inye ngenxa yeendleko. Nciphisa uxinzelelo kuhlahlo-lwabiwo mali ngokwahlulahlula ezona zilungileyo kwi-stash yakho.
Njengeemveliso zokhathalelo lwabasetyhini kukuthenga kwakho rhoqo ngenyanga, oko kuthetha ukuba uhlala ucinga ngazo zombini iindleko kunye nokhathalelo. Kodwa uyazi ukuba ufuna umgangatho ngexesha lomjikelo wakho. Kungenxa yoko le nto sihlala sinokunikwa okuhle kwiimveliso ezintle zononophelo lwabasetyhini.
Ukuthetha ngeemveliso zononophelo lwabantu abadala, zininzi izinto zokungabinakho ukuzikhethela onokukhetha kuzo kodwa ukufuna efanelekileyo kunokuba yinkohliso. Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha imveliso efunxa, kubandakanya ukuguquguquka okungqinelana nenqanaba lomsebenzi womntu omthandayo. Njengenkampani enamava egxila kwiimveliso zococeko lomntu, siqinisekile ukuba siza kukubonelela ngale nto uyifunayo.
Phila ubomi be-eco-i-Besuper® ilapha ukuzama ukunciphisa inani lenkunkuma eyingozi esiyivelisayo. Ngokwenza utshintsho oluncinci kubomi bakho bemihla ngemihla unganceda ukwenza umahluko omkhulu kusapho lwakho nakwilizwe lethu. Iinabukeni zoqalo, iingxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane, iiseti zezidlo zangokuhlwa zezityalo. Sinoluhlu olubanzi lwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, eziphambukisa inkunkuma eninzi ekulahlweni komhlaba.
UKUPHATHA KWABASEBENZI GLOBAL
Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala, Umntwana olilitha, Ilweyile Banokubulawa, I-Diaper esanda kuzalwa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka,